အနာကြီးရောဂါသည်များကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ညွှန်ကြ?? - Yangon Media Group
အနာကြီးရောဂါသည်များကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ညွှန်ကြ??
ဆေးရုံ (သို့မဟုတ်)အခြားတစ်နေရာရာ တွင် သေဆုံးသွားသဖြင့် ပြန်သယ်လာသော အနာကြီးရောဂါ သည် ရွာများမှ ရုပ်အလောင်းကို လမ်းပိတ်ဖြတ်သန်းခွင့်မပေး ခြင်းအား ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ညွှန်ကြား ချက်ပေးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က ရှမ်းပြည်နယ် တာချီလိတ်မြို့ လူထု တွေ့ဆုံပွဲတွင် အနာကြီးရောဂါသည်ရွာများမှနာရေးကို လမ်း ပိတ်ဖြတ်သန်းခွင့်မပေးခြင်းများရှိကြောင်း ခရစ်ယာန်သင်းအုပ် ဆရာတော်တစ်ပါးကတင်ပြခဲ့ရာ ゞင်းကအထက်ပါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “အဲဒါဟာ လူမှုရေးအရ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ နံပါတ်တစ်၊ နံပါတ်နှစ် ဥပဒေအရလည်း ဒီလိုပိတ်လို့မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် မို့ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများက ဥပဒေမဲ့လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းကို နောင် မလုပ်နိုင်အောင်လို့ အရေးယူပေးပါလို့ ကျွန်မအနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားညွှန်ကြားချက်ပေးပါတယ်”ဟု၎င်းကပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တာချီလိတ်မြို့နယ်အတွင်း အနာကြီးရောဂါ သည်ရွာများရှိကာ ယင်းရွာမှလူများ ဆေးရုံ(သို့မဟုတ်)အခြား နေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပါက ၎င်းတို့၏ရုပ်အလောင်းကို ရွာသို့ပြန် သယ်ခွင့်မရကြောင်း၊ ယင်းမှာလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ရွာများက သယ်ယူခွင့်မပြုခြင်းဖြစ်ကာ သယ်ယူလိုသူများက ချောင်းများ ဖြတ်သန်းသယ်ယူရပြီး အလွန်ဒုက္ခရောက်ကြောင်း ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာတော်တစ်ပါးက တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအပေါ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံက “သူတို့ကြားက ရွာတွေက သွားခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ လမ်းကိုပိတ်ထားလို့လား””ဟု မရှင်းလင်းသဖြင့် ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့သည်။ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာတော်က”ဥပမာ-ကျွန်တော်တို့ တာချီလိတ်မှာ ဆုံးသွားတယ်။သူတို့ရွာ(အနာကြီးရောဂါသည် များရွာ)သွားမယ်။ ဆိုတော့ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကတော့ သွားတယ်။ သူတို့ရွာလမ်းခွဲရောက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီလမ်းခွဲမှာရှိ တဲ့ရွာတွေက မဖြတ်ခိုင်းဘူး”ဟု ပြန်လည်တင်ပြခဲ့သည်။
“ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ ဖြတ်ခွင့်မပေးတာလဲ”ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံက ထပ်မံမေးမြန်းခဲ့ရာ”ငါတို့ရိုးရာ ရွာနာတယ်ဆိုပြီး မဖြတ်ခိုင်းတာ။ ၁၂ နာရီနောက်ပိုင်းဖြတ်မယ် ဆိုလည်း သူတို့က ဖြတ်ခွင့်မပေးဘူး”ဟု သင်းအုပ်ဆရာတော်က ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လူမှုရေးအရပြောချင် သည်မှာ အနာကြီးရောဂါသည်များသည် မည်သည့်အပြစ်မှရှိ သည့်သူများမဟုတ်ကြောင်း၊ အနာကြီးရောဂါဆိုသည်မှာ အကျင့် စာရိတ္တမကောင်းသဖြင့် ရရှိလာသည့် ရောဂါလည်းမဟုတ် ကြောင်း၊ မျိုးရိုးအရ ကူးစက်သည့်ရောဂါမျိုးလည်းမဟုတ် ကြောင်း ပြောသည်။
“ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားများ ဟာ အနာကြီးရောဂါသည်တွေကို နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့မမြင်ပါနဲ့။ ဘယ်သူမဆို အနာကြီးရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်မိသားစုမှာ မဆို တစ်ယောက်က ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အခုထက်ထိ ဘယ်လို ကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာ သေသေချာချာအဖြေရှာလို့ မတွေ့ သေးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ မ ဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အနာကြီးရောဂါသည်တွေကို ဒီလိုသတ်သတ် ရွာမျိုးနဲ့ထားတယ်ဆိုတာတောင်မှ ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စရပ် မဟုတ်ပါ ဘူး””ဟု ၄င်းကပြောသည်။ ယင်းအပြင် ပြည်သူများအနေဖြင့် ကရုဏာရှိသော စိတ် ဓာတ်များဖြင့် ယင်းကိစ္စကို ကြည့်ရှုရန်လည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ဒါဟာ လူမှုရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ပြည်သူပြည်သား တွေက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြင်ယူမှ အဓိကပြေလည်မယ့်ကိစ္စပါ။ အဲဒီတော့ ရွာနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ လုံးဝဘယ်လိုမှမဖြစ် နိုင်ပါဘူး၊ ကရုဏာနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မနာ ကျင်စေပါဘူး”ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဝေးလံခေါင်သီဒေသများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ဝန်မလေးကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ??
အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ပြည်သူကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကတိမပေးရန် နိုင်ငံတော်၏ အ
ယခုရက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်၌် ကွမ်းသီးအစိုများ ယခင်နှစ်ကထက် တန်ချိန်ရာနှင့်ချီ
ကွင်းလယ်လူ ပရင့်စ်ဘိုတန်ကို ဘာစီလိုနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အငှားခေါ်ယူ၊ ဘာစီလိုနာကို အရေးယူရန် CAS ?
ကြိုတင် ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် အဂူရိုကို လူစားလဲခဲ့ခြင်းဟု ဂွါဒီယိုလာ ရှင်းလင်း